Mi pakhat nih ahmuh ning catial asi, hriamnam cu chiah ta rih ko sih, Uniform le kedan cawk ding hmanh ah icuh can khi asi, Ethnic hriam tlai phu chung ah thazang ader bik mi cu CNA/F an si, – Kawltu Team
Mi pakhat nih ahmuh ning catial asi, hriamnam cu chiah ta rih ko sih, Uniform le kedan cawk ding hmanh ah icuh can khi asi, Ethnic hriam tlai phu chung ah thazang ader bik mi cu CNA/F an si,
1. kum 30 reng lo ram khel can chung ah CNF hi Chin miphun dih lak nih tha an pek hna lo, Ralkap nih Nawl an lak hnu ah cun CNF sin ah training ding in an ra hna, trainer 1000-2000 leng nih hriamnam pakhat ceu keng in training ter ding ah hin hrimnam lei ah cu bantuk cun ken ding an ngei lo khi asi, hriamnam pakhat hi Kawl tangka in ting 15 hrawng asi, kum 30 leng ralkap uknak doh chung ah Chin miphun hna nih hriamnam pakhat ngeih khawhnak ding ah zei zat dah an bawm khawh? timi hi ruah than ding thilaum mi asi?
2. Kum 30 leng CNA ah full member asi mi ralkap hna nih atu lio hriamnam tha ken an duh ko nain, tangka tha zang nihapek lo caah, tlamtling tein hriamnam ngeih kho asi lo, kum 30 leng can chung ah ram tang ahaum mi te hna le asi khawh chung in anrak zuam ko, mah dirhmun in atu ah 2021 nawlngeihnak an lak hnu ah, ralhrang pawl doh ding in Chin mino hna tampi nih CNA camp ah training kai ding in an ra hna, mah ara mi hna cu Uniform le hriamnam hna tlamtling tein ngah ding ah harsatnak bik arak si ko.An mah nih meithal tuahnak angei mi KIA zong nih training lio ah cun meihal tling tein an tlaihter lo, biapi bik in hriamnam hman ning le umtu ningtiang an cawnpi hmasa khi asi, atu can ah hin CNF nih hriamnam tlamtling tein ngeih khawhnak ding ah mipi lei nih ramkhel le CNA caah zei bantuk tiang dah kan bawmh hna tihi asi??
3. Mah bantuk in Chin mino hna tampi nih 2021 kum ah hin CNA camp ah anrak ra hna, training pek ding ah CNA hna zong ready an si ve bak lo khi asi, nawlngeihnak an lak hlan ah NCA hna nih Chin mino hna cu organized tuah ding ah an zuam ve ko, mah lio ah mino hna nih hram tlai mi pawl cu misual bantuk in an rak ruah anrak hmuh khi asi caah traing an kai duh hna lo khi asi, In chung ah nuamtein um an duh deuh hna, ramkhel lungput zong an ngei rih hna lo, Federal timi zong an ruat lem lo, asi nain lam zawh asi hnu ah ralkap hna nih mipi hna anrak tong cang tik ah cun hriamnam tlai in doh hi kanrak thim cang kha asi.
4. Atu ah 21 ramkhel zong hi kum zeizat dah arauh lai thei khawh asi lo, kum 1-5-10 tiang zong asi kho, fiangte in chim thiam zong ahar ko, mah caah cun CDF dirhmun in CNA cung ah ruah sualnakaum lonak hnga atha kati, CNF lei zong nih CDF cung ah ruah sualnak ngei lo ding ah pakhat le pakhat theithiamnak ngeih le palh sualnak ah siseh, tuah sualnak ah siseh, lungrual te in kar thlang ti u sih law, ram le miphun caah biapi bik in tangti hna hi atha bik cem le lam um chunh te asi, 1958 kum in nawlngeihnak lak asi hnu 1988 kum student demonstration tiang hriamnam tlai in ram khel taktak hi kan phan rih lo khi asi.
Cre: US Chin, 30.8.2021,
လက်နက်ခဲယမ်း တွေ ခဏထားဦး Uniform နဲ့ စစ်ဖိနပ် ဝယ်ဖို့​တောင် အလူးအလဲ ဖြစ်နေရတဲ့အချိန်။ CNA-CNF ဟာတိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာ အဖက်ဖက်က အားနည်းဆုံးအဖွဲ့ပါ။ (ဒါဟာ တမန်ပြည်သူတယောက်ရဲ့ ရှုမြင်ရေးသားတာကို Copy ပေးလိုက်တယ်)
(၁)နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော်တော်လှန်ရေး ကာလမှာ CNF ကို ချင်းတမျိုးသားလုံးကအားမပေးခဲ့ကြပါဘူး။အခု အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း CNF ဆီမှာ သင်တန်းတက်ဖို့ ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။သင်တန်းသား အယောက် (၁၀၀၀/၂၀၀၀)ကျော်က လက်နက်တလက်ဆီကိုင်ပြီး သင်တန်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ သူတို့မှာ ချင်းတော်လှန်ရေး လက်နက်အင်အား အခြေအနေနဲ့ အခက်ခဲတခုခုကြောင့် လက်နက်တလက်ဆီ ကိုကိုင်ပြီး သင်တန်းမပေးနိုင်တာဖြစ်မယ်ဟုပဲ ထင်ပါသည် ။လက်နက်တလက်ရဲ့ စျေးနူန်းဟာ အနည်းဆုံး မြန်မာ့ ကျပ်ငွေ ၁၅ သိန်း ကျော်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော် စစ်အာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်းမှာ ချင်းပြည်သူလူထုတလက်လုံးက ချင်းတော်လှန်ရေးအတွက် လက်နက်အပြည့်အစုံ ဝယ်နိုင်အောင် ဘယ်လောက်အထိ ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ကြသလဲ? ဆိုတာကို အားလုံး ပြန်လည်တွေးစေချင်ပါသည်။
(၂)နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော် CNA မှာ အတည်ဝင်ထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် များကိုယ်တိုင်ကတောင် ခေတ်မီစစ်လက်နက်ကောင်းကို ကိုင်ချင်ခဲ့ကြပေမယ့် ငွေအင်အားခက်ခဲခြင်းကြောင့် ခေတ်မှီစစ်လက်နက်တွေကို ပြည့်စုံစွာကိုယ်ဆောင်ထားနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော်ကာလအတွင်း တောထဲမှာ ရှိသလောက် တတ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့ ကြိုးစားပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ထိုအခြေအမျိုးကနေ အခုလို ၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုကွဲလာသည့်နောက်ပိုင်းမှ ချင်းလူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာတို့ဟာ CNA Camp မှာ အခြေခံစစ်ပညာသင်ကြားဖို့ ဒေသအသီးသီးကနေ လာရောက်ခဲ့ကြတယ်။ယင်းရောက်လာခဲ့ကြသည့် ချင်းလူငယ်အားလုံး၏ စားဝတ်နေ ရေးကစ လက်နက်အပြည့်အစုံစွာ ထောက်ပံံ့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာက အလွန်ပင်ခက်ခဲ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်တိုင်လက်နက်စက်ရုံရှိတဲ့ KIA တောင် သင်တန်းကာလမှာ လက်နက်အစစ်တလက်ဆီပေးပြီး မသင်ရပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်တတ်ယုံနဲ့ လက်နက်မပေးပါဘူး။အဓိကလက်နက်ကို သိမ်းကြောင်းနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိအောင် အရင်သင်ပေး ခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့် ယခုချိန်မှာ CNF က လက်နက်အင်အား အပြည့်အစုံထောက်ပံ့နိုင်အောင် ချင်းပြည်သူလူထုများဖက်ကလည်း အတိတ်တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှာ CNA အတွက် (သို့)ချင်းတော်လှန်ရေးအတွက် ဘယ်လောက်အထိ ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ကြသလဲ?
(၃)ဒီလိုမျိုး ချင်းလူငယ်မြောက်များစွာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ CNA Camp မှာလာပြီး စစ်ပညာသင်ကြားခဲ့မယ်လို့တောင် CNA က ကြိုတင် သိတောင်မှ သိမှာမဟုတ်ဘူး။အာဏာသိမ်းမူ မဖြစ်ခင်ကတည်းက CNA က အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး ချင်းလူငယ်တွေ အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းကိုတတ်ကြဖို့ စည်းရုံးခဲ့ကြတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းက ချင်းလူငယ်တော်တော်များများက လက်နက်ကိုင်ဆိုတာ သူပုန်လူဆိုးဟုပဲ မြင်ခဲ့ကြတယ်။မသင်ချင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်မြို့ပေါ်မှာပဲ အေးဆေးဆေး ဂျင်ခံပြီး နေချင်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလည်း မနိုးကြားကြဘူး။Federal ဆိုတာကိုလည်း စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ဒါပေမယ့် စစ်တပ်က ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ချင်းပြည်သူလူထုကို အကြမ်းဖက် ပြိုကွဲလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ချင်းလူငယ်တွေက ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့လို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်လမ်းစဉ်ကိုပဲ မိမိကိုယ်တိုင်က ဆုံးဖြတ်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။
(၄)အခု ၂၁ တော်လှန်ရေးဆိုတာလည်း ၁ နှစ် လည်း ကြာနိုင်တယ်။၂ နှစ်လည်း ကြာသွားနိုင်တယ်။၃ နှစ် ၅ နှစ်လောက်လည်း ကြာသွားနိုင်တယ်။၁၀ နှစ်လည်းကြာသွားနိုင်တယ်။လက်ရှိအခြေအနေမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကြိုတင် ပြောထားလို့မရသေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့် CDF များအနေဖြင့် CNA ပေါ်မှာ အထင်လွှဲမှားမူများ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။CNF ဖက်များကလည်း CDF ပေါ်မှာ အထင်လွှဲမှားမူလည်း မရှိစေချင်ပါဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံး အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကို အပြန်အလှန်နားလည်ပေးတတ်ပြီး မိမိရဲ့ “အားသာချက်”တွေကို ချင်းအမျိုးသား ပေါင်းစည်းရေးအတွက်ကိုသာ ဦးတည်သွားစေချင်ပါသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် စစ်တပ်က စတင် အာဏာသိမ်းပိုက်သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကျောင်းသားလူထုအရေးခင်းအချိန်အထိ ချင်းတော်လှန်ရေးသည် “လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး”အဆင့်အထိမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပေ။
၂၀၂၁ ခုနှစ် lသြဂုတ် ၃၀
← Vawlei cung ah Dictator hna khawkhan lairelnak cu, setan nak in an lungput cu mah tluk in maw? arak rapthlak ko? mah ram hna le minung cu??
America nih Afghan ram Kabul airport cu tu zing khua dei dengmang ah ahnu bik C-17 nih an chuah tak cang zei thil dah atlung than lai?? 85 trillion an sung Biden?? →